Apple wuxuu bilaabayaa New USB-C adabtarada Multiport oo leh HDMI | Wararka IPhone
Kariim Hmeidan | | Qalabka IPhone, iPad Pro
Wiilasha Cupertino waxay nolol ku sameeyaan iibinta aaladaha iyo agabkaUgu dambeyntiina, qalabkani waa waxyaabaha ugu raqiisan (mararka qaarkood xitaa way ka qaalisan karaan) oo aan ka iibsan karno Apple Store kasta. Qalabka qaar oo ka mid noqon kara guryo loogu talagalay iPhone-keena, ilaa fiilooyinka iyo xarumaha, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Apple soo saarto laakiin si gaar ah u iibiya.
Aan dhammaad lahayn oo ah qalabyada Waqti ka waqti ayay la cusbooneysiinayaan iyagoo na siinaya astaamo cusub kuwan. Maanta waxaan kuu keenaynaa dib u eegis maxay ka sameeyeen midkood, the hub, ama dongle, oo leh taageero loogu talagalay isku xirnaanta HDMI. Iyaga ayaa cusbooneysiiyay ka dib boodboodka waxaan kuu sheegeynaa warka aan ku heli doonno noocaan cusub.
El moodel cusub oo la bilaabay waa A2119, kii hore wuxuu ahaa A1621, dongle oo noo keenaya isku xirnaan la mid ah qaabkii hore, a Isku xirka HDMI, USB-C, iyo USB-A. Dabcan, waa la cusbooneysiiyaa iyadoo la hagaajinayo isdhaafsigii hore. Dhamaan wax yar 69 US dollars (Suuqa Mareykanka) oo sugaya in laga sii daayo adduunka oo dhan maalmaha soo socda (waqtiga qorista maqaalkan waxaa laga heli karaa oo keliya Mareykanka). Aaladaha la jaan qaadi kara adabtaradan cusub ee dekedda badan leh HDMI 2.0 taageerada waa kuwan soo socda:
15-inch MacBook Pro ayaa la sii daayay 2017 ama wixii ka dambeeya
iMac Retina waxaa la sii daayay 2017 ama wixii ka dambeeyay
Muhiimadu waa in laga faa’iideysto kartida 60Hz oo leh fiidiyowga 4K-ka ah ee ku jira 'Mac' waxaan u isticmaali doonnaa macOS Mojave 10.14.6 ama ka dib, iPad Pro halkii aan ka isticmaali lahayn macruufka 12.4 ama ka dib. Xaruntan, sidaan kuu sheegnay, waxay u timid inay beddesho qaabkii hore ee kaliya ku taageeri jiray 4K video 30Hz iyo 1080p 60Hz. Intaa waxaa sii dheer, tan cusub ee USB-C-ka ah adabtarada isku xiraha AV waxaa ka mid ah HDR taageero fiidiyoow leh HDR10 marka lagu daro Dolby Vision. Markaa waad ogtahay, haddii aad raadineyso adabtaraha qaabkan, ha ka waaban inaad hesho adabtaradan cusub ee Apple, ugu dambeyn, ka imaanshaha Cupertino waxaan hubineynaa iswaafaqsanaanta aaladdayada wax dhibaato ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Apple wuxuu soosaarayaa adabtarada cusub ee loo yaqaan 'USB-C multiport adapter' HDMI
Gacaliye Esther ee macruufka waxaa la sii deyn doonaa dhammaadka sanadka